Shona Translation 11-01-07 - The Zimbabwean
Shona Translation 11-01-07
Chero vagari vemumasabhabha vave kutemba nemabhasikororo kuenda kumab
asa. Iyi motokari ndeya gedion Gono
Nyaya NaGift Phiri
VaTonga vonyimwa chikafu nekuvhotera MDC
BINGA – Hurumende yaPresident Robert Mugabe yave kuomesa kugovewa kwechikafu kuBinga ichinyima vanotevedzera bato rinopikisa kuti irambe ichitonga. Izvi zvakataurwa nevebato rinopikisa uye nemamwe masangano ekodzero dzevanhu.
VaTonga avo vanogara zvisina kunyatsotsarukana vakavhotera Movement for Democratic Change pasarudzo yeParamende mugore ra2005 nemusarudzo yemakanzuru muna October gore rakapera. Iye zvino vofa nenzara nokunyimwa chikafu.
“Tiri kunetseka zvikuru nezviri kuitika kuno,” vakadaro vaJoel Gabuzza, mumiririri wenzvimbo iyi muParamende. “Kana tikasawana chikafu munzvimbo iyi nekukurumidza vanhu vari kuzofa asi kufa kwacho kuchitevedzera mapato avakarerekera.”
VaGabuzza ndemumwe wevari kuwedzera umboo hwekuti hurumende yaVaMugabe yakamisa kupa chikafu kuvatevedzeri vemapato anopikisa. Muna November gore rakapera veEuropean Union vakapomera Mugabe mhosva yekushandisa chikafu sechombo chezvematongero enyika uye vahurumende yeUnited States vakambotaura kuti vangangotsvaga nzira dzekumanikidza kuti chikafu chisvike kuvanhu vose.
Vanhu vanokwana chikamu chimwe pazvina muvanhu vemuZimbabwe avo vanosvika 12,5 million vari parumananzombe nenyaya yekushaya chikafu, sekutaura kwakaita veUnited Nations’ World Food Programme (WFP).
VeZanu (PF) yaVaMugabe vanoti kushaikwa kwechikafu kuri kukonzerwa nekusanaya kwemvura, vachiramba nyaya yekuti vari kushandisa chikafu sechombo uye vanopomerawo masangano ekubatsira vanhu mhosva yekuwanza chikafu kune vanopikisa.
VaGabuzza vakati zvekunyima vatevedzeri vebato rinopikisa chikafu zvakatanga mazuva esarudzo dzemakanzuru, muna October gore rakapera musarudzo yakahwinwa neZanu(PF) iyo inonzi yakabirira.
Vanhu vaiva nemakadhi eZanu (PF) chete ndivo vaiwana mukana wekuwana chikafu. MaCIO ndiwo aifamba achiona kuti izvi zviri kutevedzerwa pamadhepa eGrain Marketing Board muBinga nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza.
Mapurisa akapamba donje remadzimai
HARARE – Mapurisa ari kuramba kuregedza zvihomwe 81 zvedonje rekumwedzi remadzimai zvinokosha $129,200 zvakatorwa mumugwagwa wekuenda kuBindura mwedzi wakapera zvichinzi zvaityirwa kuti zvakagadzirwa kukuvadza madzimai aizorishandisa ozotadza kubereka.
Nyaya isina maturo iyu yakashamisa veZimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) avo vakanopemha donje iri vakariwana kuAction for Southern Africa iyo inobatsira.
Dotonje rakatorwa iri raienda kuDocking Farm kuConcession kunopiwa vashandi. Mapurisa aiva pamugwagwa akamisa motokari yeGeneral Agricultural and Plantation Workers Union of Zimbabwe (GAPWUZ), bazi reZCTU rakanangana nevashandi vekumapurazi, ndokutora matonje aya vachiti akaiswa mushonga nevarungu vakatorerwa mapurazi.
Mupurisa anonzi akatora donje iri ndoriaendesa kubazi rezveutano kuHarare kuti rinoongororwa.
Kuedza kweGAPWUZ kuti idzorerwe matonje aya kwakashaya basa, uye mapurisa akatozoenda kumahofisi eGAPWUZ kuMvurwi ndokunotorazve mamwe masaki 189 anokoshaZ$302,400 ayo ainziwo akaiswa mushonga wekurti madzimai anoashandisa asabereka.
“Hapana kana umboo hwekuti donje iri rakaiswa mushonga, asi kuti ihurumende iri kutsvaga nzira dzekusvibisa zita reGAPWUZ nemamwe masangano ose ari kuedza kubatsira vashandi,” akadaro mumwe mumiririri wemasangano erubatsiro.
Vanhu votiza nyika
HARARE – Chirongwa chaPresident Robert Mugabe chekuwedzera makore avo ekutonga kusvika mugore ra2010 chakonzera kuti vanhu vakawanda vafunge zvekubuda munyika – vazhinji vavo mumwedzi mishoma iri kutevera.
Vaongorori vanoti vanhu vacho vari kubuda munyika ndivo vane ruzivo asi vave kusiya nyika nokusagutsikana nemagariro avo uye nokusaona kuti zvichazogadzirika sei.
Nyaya yekuramba kuenda kwaVaMugabe ndiyo yazoita kuti vazhinji vati tava kuenda hedu.
Vazhinji vari kuronga zvekubuda munyika vanhu vakaita sevemakombiyuta, vekugadzira zvemagetsi, mainjiniya, vakoti, nevakapedza kudzidzira mabasa.
VaRichard Makoni nyanzvi yezvemabasa mukambani inonzi Lorimark vakati kubuda kwevanhu vane hunyanzvi muZimbabwe kwakawedzerwa nekunyanya kukwira kwezvinhu nekusamira zvakanaka kwehupfumi nezvematongerwo enyika; ndizvo zvikonzero zvikuru zvaita kuti vanhu vafunge zekubuda munyika.
Kudhura kwezvinhu, kukwira kwemitero, kushaikwa kwezvinhu muzvitoro, kudzikira kwemari yekutambira, kushaikwa kwedzimba, mishonga, fundo nekusaona kujeka kweramangwana kwasvika pakuti iyo hurumende chaiyo nemakambani ehurumende akaita seTel*One, neZESA arasikirwe nevanhu vari kuenda kunzvimbo dzakaita seNew Zealand, Australia uye Birmingham kuUK uko kuri kudiwa vanhu vanehunyanzvi hwezvekugadzira zvinhu.
Mumwe maneja weTel*One akati kambani yavo yakatorasikirwa nevanhu vanokwana zvikamu zvisere mugumi gore rakapera chete, uye 15 matechnicians akatoisa tsamba dzekubuda basa mwedzi uno chete vechiti vari kunotsvaga zviri nani.
“Hongu tingati kubuda kwevanhu kwakanangana nezviitiko mune zvematongerwo enyika zvemwedzi wakapera,” akadaro mukuru uyu.
KuZesa uko kwakamboitwa kuramwa kwemabasa kunonziwo vanhu vapera. Bato resangano repasi rose re United Nations, UNDP rakaburitsa kuti vanhu 3 million vane hunyanzvi hwakasiyana-siyana vari kunze kwenyika.
Mashefu emapurisa oda chiokomuhomwe kubva kuvadiki
BULAWAYO – Mashefu emapurisa anonzi ari kutora chiokomuhomwe kuti mapurisa asina nyembe apinde mumabasa ane mari ari kubhadharwa neReserve Bank of Zimbabwe.
Zvinonzi vari kumanikidza mapurisa asina nyembe kuti abvise ma$30 000 echiokomuhomwe, asi mamwe mapurisa asina kufara nenyaya iyi akanomhan’ara kumukuru wemapurisa VaAugustine Chihuri, avo vanonzi vakatanga kuongorora nyaya iyi.
“Komishina Chihuri vakatosvika kuno vanzwa nekuridzirwa nhare nenyaya yechiokomuhomwe,” akadaro mumwe mupurisa, ndokuwedzera achiti vaChihuri vakaenda kunzvimbo dzekushandira dzakagadzirirwa vari muchirongwa “Makorokoza Zvakwana” uko kwavakanoudzwa kuti mari yaibhadharwa sei yekuti vawane mabasa aya.
Mapurisa akavaudza kuti mashefu epamakamba akange achipa mabasa kune avo vanenge vabvisa mari chete kuti vawane mabasa aya anopa $300 000 pasvondo mbiri.
“Vamwe vaenda katatu katatu vamwe vasati vamboenda, nokuti vanobhadhara chioko
muhomwe. Ini shefu vangu vanoona nezvemari vakatondiudza vachiti, ‘Iwe mfana uchafa nenzara kana usingadi kudya nemashefu’. Kwapera mazuva maviri zita rangu iro rakange ramboiswa ndakazoona ratobviswa pachiiswa mumwe akanga achitopinda gwetatu,” akadaro mumwe mupurisa.
Crisis in Zimbabwe Coalition Statement on International Day of Democracy
FULL THREAD: #FakeEvidence – Team Pachedu Debunks The ZBC Documentary That Claims MDC Trio Abductions Were Fake